“Real Madrid waxay 500 milyan oo euros ku bixin doontaa suuqa xagaaga ee soo aadan si ay u sameyso…..” – Gool FM
Antonio Conte oo ku amray maamulka Inter inay lasoo saxiixdaan xiddigiisii hore ee kooxda Chelsea
Ernesto Valverde oo war farxad helaya kahor kulanka El Clásico
Real Madrid oo heshay furaha ay ku heli karto saxiixa Pogba
Ernesto Valverde oo si weyn u amaanay Lionel Messi kaddib saddexleydii uu xalay ka dhaliyay Real Mallorca
Lionel Messi oo xalay dhaafay rikoodh uu Cristiano Ronaldo ka sameeyay horyaalka La Liga
Jurgen Klopp oo doortay xiddiga uu arko inuu noqon karo badelka Saalax iyo Mané
Man United oo guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Man City Etihad Stadium…+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Barcelona Iyo Mallorca ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Liverpool oo wali dhinaceeda dhulka la dhigi la’ayahay & natoojooyinka kulamadii kale ee laga ciyaaray Premier League…+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Manchester derby kooxaha Man City Iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
“Real Madrid waxay 500 milyan oo euros ku bixin doontaa suuqa xagaaga ee soo aadan si ay u sameyso…..”
Dajiye April 18, 2019
(Spain) 18 Abriil 2019. Macalinka halyeeyga ah ee reer Talyaani isla markaana leyliya kooxda ka ciyaarta horyaalka Chinese Super League Jiangsu Suning ee Fabio Capello, in Real Madrid ay ku bixin doonto 500 milyan oo euros suuqa xagaaga ee soo aadan.
Capello oo horey u soo leeliyay kooxda Real Madrid ayaa sidoo kale sheegay inuu ka war qabo in Los Blancos ay sameyn doonto saxiixyada 4 ciyaaryahan waaweyn si ay u dhisto kooxda awood badan.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu dhawaan bixiyay Fabio Capello waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan ku sugnaa magaalada Barcelona isbuucan, shaqsi si aad ah ula socda arimaha kooxda Real Madrid ayaa ii sheegay in Los Blancos ay ku bixin doonto 500 milyan oo euros si ay u sameyso saxiixyada ay ka dooneyso suuqa xagaaga ee soo aadan”.
“Real Madrid waxay u baahan tahay inay shaqaaleysiiso 4 ama 5 ciyaartoy kaddib marka uu furmo suuqa xagaaga, balse shaqsiga kaliya ee sidaas sameyn kara ayaa ah macalinka reer France ee Zinedine Zidane”.
Si kastaba Fabio Capello ayaa sheegay in uu la yaabay soo laabashada Zidane oo ku soo laabtay Real Madrid, isagoo dhinaca kale tilmaamay inuu ka xoog badnaan doono bilawgiisii hore shaqada tababarnimo ee Los Blancos.
ARAG: Wixii uu xalay sameeyay Van Dijk markii uu Maxamed Saalax.......+Sawirro
“Messi wuxuu sameeyaa wax aan qof kale sameyn karin” - Carlos Tevez